Sina 15 Khz Ultrasonic Welding Generator Transducer miaraka amina booster Horn Square Mollure sy orinasa | Qianrong
15 Khz Ultrasonic Welding Generator Transducer miaraka amin'ny Booster Horn Square Molding
Fisokajiana QR-15K QR-20K
hatetika 15Khz 20Khz
fahefana 2600w 1500w
Zintin'aratra 220V 220V
gropy Generator nomerika Generator nomerika
Fitaovana tandroka Steel Steel
Dimension an'ny tandroka 120 * 25mm 110 * 20mm
Ny lanjan'ny tandroka 11kgs 5.5kgs
Dimension an'ny mpamorona 250 * 150 * 300mm 250 * 150 * 300mm
Net lanja ny generator 6kgs 6kgs
Package Tranga hazo Tranga hazo
Application Lasary mason-tava tsy tenona Lasary mason-tava tsy tenona
Ny foton'ny masinina fanjairana ultrasonic dia afaka manjaitra ny ankamaroan'ny lamba thermoplastic. Raha ampitahaina amin'ny fanjairana fanjaitra mahazatra sy kofehy dia tsy mila fanjaitra sy kofehy ny zaitra fanjairana, hajaitra avo, famehezana tsara ary hafainganana haingana.
Ny masinina masonika ultrasonika dia fitambaran'ny transducer ultrasonic 15Khz sy 20Khz, tandroka, lohana vy vy manokana ary fanohanana ny famatsiana herinaratra CNC manokana. Ny famatsiana herinaratra voafehy isa nomerika dia mamadika ny fahefan'ny tanàna ho 20Khz haingam-pandeha avo sy hery AC avo lenta ary manome izany ho an'ny transducer ultrasonic. Ny transducer ultrasonic dia mamadika ny angovo elektrika ho angovo mekanika (ultrasonic). Ny transducer dia miteraka amplitude rehefa manao fihetsiketsehana telescoping amin'ny lafiny lava, ary avy eo mamindra azy amin'ny lohan'ny welding amin'ny alàlan'ny tandroka. Amin'izany, ny lohan'ny welding dia mihodina.
Raha ampitahaina amin'ny fanjaitra vita amin'ny fanjaitra nentim-paharazana dia manana tombony manaraka ireto ny zaitra tsy misy tenona ultrasonic tsy misy tenona.
1. Ampiasaina ny fantsom-pandrefesana ultrasonic, manala ny filana fanjaitra sy kofehy, manala ny filana fanovana fanjaitra matetika, tsy misy tonta tapaka amin'ny fanjairana kofehy nentim-paharazana, ary manapaka tsara sy manisy tombo-kase ny lamba. Ny zaitra koa dia manana andraikitra haingon-trano. Hery adhesive matanjaka, afaka mahatratra effet tsy tantera-drano, embossing mazava, effets embossed telo-habe amin'ny etona, hafainganam-pandeha haingam-pandeha, vokatra vokatra tsara, avo lenta kokoa sy tsara tarehy, azo antoka ny kalitao.
2. Amin'ny alàlan'ny fanodinana kodiarana vy sy ultrasonika manokana, ny sisiny voaisy tombo-kase dia tsy ho triatra, tsy handratra ny sisin'ny lamba, ary tsy hisy burrs na curling.
3. Tsy ilaina ny preheating mandritra ny fanamboarana ary azo atao ny miasa maharitra.
4. Tsotra ny fandidiana, ary tsy misy fahasamihafana lehibe amin'ny fomba fiasan'ny milina fanjairana nentim-paharazana, ary ny mpiasa manjaitra tsotra dia afaka mampiasa izany.
5. Vidiny ambany, 5 ka hatramin'ny 6 heny haingana noho ny milina nentin-drazana, ary ny fahombiazany avo.
Previous: Haavo avo 40Khz Vibration Ultrasonic Rubber Cutting Blade miaraka amin'ny Generator Digital
Manaraka: 20Khz 2000w Ultrasonic Transducer Booster Assembly ho an'ny milina fanamafisana ny sofina